Mateo 9 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
9 Enti ɔforoo ɔkorow no twa kɔɔ n’ankasa kurom.*+ 2 Na hwɛ! na wɔde obubuafo bi a ɔda kɛtɛ so rebrɛ no.+ Bere a Yesu huu wɔn gyidi no, ɔka kyerɛɛ obubuafo no sɛ: “Ɔba, ma wo bo ntɔ wo yam; wɔde wo bɔne afiri wo.”+ 3 Na hwɛ! akyerɛwfo no mu bi keka kyerɛɛ wɔn ho sɛ: “Damfo yi reka abususɛm.”+ 4 Ná Yesu nim wɔn adwene,+ enti ɔkae sɛ: “Adɛn nti na moredwen bɔne mo koma mu?+ 5 Sɛ nhwɛso no, nea ɛwɔ he na ɛyɛ mmerɛw, sɛ wɔbɛka sɛ, wɔde wo bɔne afiri wo, anaasɛ wɔbɛka sɛ, sɔre na nantew?+ 6 Nanso, nea ɛbɛyɛ na moahu sɛ onipa Ba no wɔ tumi wɔ asase so sɛ ɔde bɔne firi+ nti​—” afei ɔka kyerɛɛ obubuafo no sɛ: “Sɔre, fa wo kɛtɛ, na kɔ wo fie.”+ 7 Ɛnna ɔsɔre kɔɔ ne fie. 8 Bere a nnipakuw no huu eyi no, ehu kaa wɔn, na wɔhyɛɛ Onyankopɔn a ɔde tumi+ a ɛte saa maa nnipa no anuonyam.+ 9 Afei bere a Yesu fi hɔ retwam no, ohuu ɔbarima bi a wɔfrɛ no Mateo sɛ ɔte towgyebea, na ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Bedi m’akyi.”+ Ɛhɔ ara na ɔsɔre dii n’akyi.+ 10 Akyiri yi, bere a ɔte adidii wɔ fie hɔ no,+ hwɛ! towgyefo ne nnebɔneyɛfo bebree bae na wɔbɛtenatenaa Yesu ne n’asuafo no nkyɛn wɔ adidi no ase. 11 Na bere a Farisifo no huu eyi no, wobisaa n’asuafo no sɛ: “Dɛn nti na mo kyerɛkyerɛfo no ne towgyefo ne nnebɔneyɛfo didi?”+ 12 Ɔtee wɔn nsɛm no, ɔkae sɛ: “Nnipa a wɔwɔ ahoɔden no nhia ɔyaresafo,+ na mmom wɔn a wɔyare na wohia. 13 Afei monkɔ na munkosua nea eyi kyerɛ, ‘Mepɛ mmɔborɔhunu, na ɛnyɛ afɔrebɔ.’+ Na mammɛfrɛ treneefo na mmom nnebɔneyɛfo.” 14 Afei Yohane asuafo no baa ne nkyɛn bebisaa no sɛ: “Dɛn nti na yɛne Farisifo no di mmuada na w’asuafo no nni mmuada?”+ 15 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Bere a ayeforokunu+ no da so wɔ ne nnamfonom nkyɛn yi, ɛbɛyɛ dɛn na wɔn werɛ ahow? Nanso nna bi bɛba a wɔbɛfa+ ayeforokunu no afi wɔn nkyɛn, ɛno na afei wobedi mmuada.+ 16 Obiara mfa ntama mono ntare atade dedaw mu; efisɛ n’ahoɔden no bɛma atew afa atade no mu ma ne ntetewee no ayɛ kɛse koraa.+ 17 Saa ara nso na wɔmfa bobesa mono ngu nsa kotoku dedaw mu; sɛ wɔyɛ saa a, nsa kotoku no pae ma nsa no tu gu na kotoku no sɛe.+ Mmom no wɔde bobesa mono gu nsa kotoku foforo mu na abɔ nneɛma abien no nyinaa ho ban.”+ 18 Bere a ɔreka eyinom akyerɛ wɔn no, hwɛ! ɔpanyin+ bi a na waba hɔ bɛkotow no+ kae sɛ: “Saa bere yi de, ɛbɛyɛ sɛ me babea no awu;+ nanso bra na fa wo nsa begu no so na ɔbɛba nkwa mu.”+ 19 Ɛnna Yesu sɔre fii ase dii n’akyi, na n’asuafo no nso yɛɛ saa ara. 20 Na hwɛ! ɔbea bi a mogya atu no+ mfe dumien fi n’akyi de ne nsa bɛkaa n’atade nguguso ano;+ 21 nea ɔkae wɔ ne mu ne sɛ: “Sɛ mede me nsa ka n’atade nguguso no kɛkɛ mpo a, me ho bɛtɔ me.”+ 22 Yesu dan ne ho, na ohuu no no, ɔkae sɛ: “Ɔbabea, ma wo bo ntɔ wo yam; wo gyidi ama wo ho atɔ wo.”+ Na efi saa dɔn no ɔbea no ho tɔɔ no.+ 23 Afei, bere a ɔbaa sodifo no fie+ na ohuu mmɛnhyɛnfo ne nnipakuw no sɛ wɔreyɛ gyegyeegye no,+ 24 Yesu fii ase kae sɛ: “Mumfi ha, na abeawa no nwui, na mmom wada.”+ Eyi nti wofii ase serew no.+ 25 Afei bere a nnipakuw no fii adi ara pɛ, ɔkɔɔ mu kosoo ne nsa,+ na abeawa no sɔree.+ 26 Nokwarem no, eyi ho asɛm trɛw kɔɔ mpɔtam hɔ baabiara. 27 Bere a Yesu fi hɔ retwam akɔ no, anifuraefo baanu+ dii n’akyi teɛteɛɛm sɛ: “Dawid Ba, hu yɛn mmɔbɔ.”+ 28 Bere a ɔkɔɔ fie hɔ no, anifuraefo no baa ne nkyɛn, na Yesu bisaa wɔn sɛ: “Mowɔ gyidi+ sɛ metumi ayɛ eyi?” Wobuaa no sɛ: “Yiw, Awurade.” 29 Ɛnna ɔde ne nsa kaa wɔn aniwa+ kae sɛ: “Sɛnea mo gyidi te no saa ara na ɛnyɛ mma mo.” 30 Na wɔn aniwa huu ade. Bio nso, Yesu hyɛɛ wɔn denneennen sɛ: “Monhwɛ na obiara ante ho asɛm.”+ 31 Nanso wɔn de, wofii adi no, wɔmaa mpɔtam hɔfo nyinaa tee ne ho asɛm.+ 32 Afei wɔrefi hɔ no, hwɛ! nkurɔfo de mum bi a ɔwɔ adaemone brɛɛ no,+ 33 na bere a otuu adaemone no, ɔbarima a ɔyɛ mum no kasae.+ Afei, nnipakuw no ho dwiriw+ wɔn na wɔkae sɛ: “Wonhuu ɛso bi da wɔ Israel.” 34 Nanso Farisifo no fii ase kae sɛ: “Ɔnam adaemone panyin so na etu adaemone.”+ 35 Na Yesu kokyinkyin nkurow ne nkuraa nyinaa mu, kyerɛkyerɛe wɔ wɔn hyia adan mu kaa ahenni no ho asɛmpa, na ɔsaa nyarewa ne ahoɔmmerɛw ahorow nyinaa bi.+ 36 Bere a ohuu nnipakuw no, wɔyɛɛ no mmɔbɔ,+ efisɛ na wɔayɛ sɛ nguan a wonni hwɛfo+ a wɔapirapira wɔn agyaw wɔn agu hɔ. 37 Ɛnna ɔka kyerɛɛ n’asuafo no sɛ: “Yiw, otwa adwuma no sõ, nanso adwumayɛfo no sua.+ 38 Enti monsrɛ otwa adwuma Wura no ma ɔmma adwumayɛfo mmra ne twa no mu.”+
^ Kyerɛ sɛ, Kapernaum, baabi a na Yesu taa tena yɛ ne som adwuma no wɔ Galilea asase so no.